March 2018 Archive News | Page3| eTanitharyi
March 2018 Archive News
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကျွန်းစုမြို့နယ်ကံမော်ကျေးရွာအုပ်စုရပ်မိရပ်ဖများသို့ Backhole ယာဉ်တစ်စီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
မြိတ် မတ် ၁၆
ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကံမော်ကျေးရွာနေပြည်သူများ ကျေးရွာတွင်းသွားလာမှုအဆင်ပြေရေး၊ ကျေးရွာလမ်း များကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှ ငွေကျပ်(၈၅)သန်းတန်ဖိုးရှိ မြင်းကောင်ရေ(95Hp)၊ LIUGONG (2017) Backhole ယာဉ်တစ်စီးကို ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများထံ မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Karen MacArthur နှင့်အဖွဲ့ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အား လာရောက်တွေ့ဆုံ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကနေဒါနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Karen MacArthurနှင့်အဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများအား လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုမျာ းပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့်သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့(၁)နှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုများပြန်လည် စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့်သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့(၁)နှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Jaroslay Dolecek နှင့် အဖွဲ့ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အား လာရောက်တွေ့ဆုံ
ထားဝယ် မတ် ၁၃
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Jaroslay Dolecek နှင့် အဖွဲ့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအား လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။